သင်ဟာ ဘယ် MLBB ကစားသမားမျိုးလဲ? | Codashop Blog MM
Home Games သင်ဟာ ဘယ် MLB...
သင်ဟာ ဘယ် MLBB ကစားသမားမျိုးလဲ?
သင့်ရဲ့အသင်းသားတစ်ယောက် သူ့ lane မှာ Aldous နဲ့ယှဉ်ပြီး minion သွားစားတာ ဘယ်နှခါလောက်မြင်ဖူးသလဲ? သင်သာ Aldous ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Soul Steal နဲ့တစ်ချက်တည်းခုတ်ပြီး အဲဒီကောင်ကိုရှင်းပစ်လိုက်မယ်မလား? Mobile Legends ကစားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အချိတ်အဆက်မိဖို့ teamwork ကအရေးကြီးဆုံးပါ။ တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ရိုင်းစိုင်းပြီး ပြောလို့ဆိုလို့မရရင်တော့ squad ၁ခုလုံးအတွက် victory ရဖို့ အခွင့်အရေးပျောက်မှာပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ MLBB ကစားသမားပုံစံတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ အကြောင်းကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
ဒီကစားသူကိုတော့ ပွဲထဲမှာ “အဓိက ကစားသူ” အဖြစ် အဓိက damage dealer, အသင်းရဲ့ မဏ္ဍိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီကစားသူကလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် – – marksman, assassin, တစ်ခါတစ်လေ mage ပေါ့။ Triple kills တွေ savages တွေရတာတွေအပြင် ဒီ ကယ်ရီရဲ့ကောင်းတာတစ်ခုက သူကသူ့ role ကိုကောင်းကောင်းနားလည်တာပါပဲ။ သူကဘယ်သူ့ကိုအရင်သတ်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ဆုတ်ရမယ်တွေသိထားတဲ့အတွက် အသင်းတစ်သင်းတိုင်းမှာတော့ carry hero တစ်ကောင်ရှိသင့်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသား အသင်းသား ဇာတ်ပို့ဆု
ဒီ အသင်းသားကတော့ အကျွမ်းဆုံး supporter ပေါ့! တိုက်နေတဲ့အချိန် Support လုပ်ရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ damage ထွက်တာတွေကို ထိန်းပေးရင် carry လုပ်တဲ့သူက ကြိုက်သလောက် kills ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ နောက်သူတစ်ကယ်ပိုင်နိုင်တဲ့အပိုင်းကတော့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ အသင်းသားတွေကိုပြန်ဆုတ်နိုင်အောင် အာရုံလွှဲတာပါ။ ဒီကစားသူဟာ သူ့ရဲ့ stun နဲ့ နှေးစေတဲ့ skills တွေကို အချိန်ကိုက်ချနိုင်တော့ အသင်းအတွက်အထောက်အကူလည်းပြု၊ ပြန်ဆုတ်ချိန်လည်းရ တစ်ခါတစ်လေ ချုံခိုပါတိုက်လို့ရတာပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ သူက အသင်းရဲ့ marksman တွေကိုအချိန်ကြာတဲ့အထိမသေအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင် အသက်ပြန်ဖြည့်ပေးပြီး shield တွေနဲ့ကာပေးတာတွေလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
Main tank ဟာဆိုရင် အဖွဲ့ရဲ့အားကိုးရတဲ့ ကာကွယ်ပေးတဲ့သူပါ။ သူက carry heroes တွေကို lane ရှင်းပေးပြီး farm လုပ်လို့ရအောင် ကလေးထိန်းသလို လိုက်ကြည့်ပေးတယ်။ သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပြောစရာမလိုတဲ့ timing တွေနဲ့ စပြီး ရန်သူဘက်က damage တွေကိုခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အကြမ်းပတမ်း damage ထုတ်နိုင်မယ့်လူတွေက free hits တွေနဲ့ရန်သူဘက်ကိုပြန်ဆော်လို့ရသွားတယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ tanks တွေက ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးတွေအနေနဲ့လည်း တိုက်ပေးတယ်၊ သူတို့ကရန်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းပေးရင် crowd control ကိုအများဆုံးရနိုင်မလဲဆိုတာတွေသိတယ်။ ပြီးတော့ တခြားသူတွေထက်ပိုသာတဲ့ tank တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာက သူတို့ဟာ ကိုယ့်အသင်းသားတွေကို တိုက်ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတာသိတာပါပဲ။
နောက်တစ်သုတ်ကတော့ ဒီစာရင်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုသတိထားဖို့တော့ ကြိုပြောထားမယ်နော်။
ဒီကစားသမားကတော့ တကယ်ကစားတဲ့ skill ထက် ပါးစပ် skill ကတော့ပိုကြမ်းတယ်ဗျို့။ ဂိမ်းစစချင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်မှာတင် ရန်သူတွေကို သူရဲ့ဆိုက်ဝါးတွေမိအောင် စပြီးဆဲပါတယ်။ ဒါတင်မကသေး ကိုယ့်အသင်းသားတွေ (သိပ်မဆော့တတ်တဲ့သူတွေ၊ rank နဲ့ KDAs နည်းတဲ့သူတွေ) ကိုသူမကြိုက်တာတစ်ခုခုရှိရင်ပြန်ဆဲတဲ့ဟာတွေပေါ့။ ဒီလို player မျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ သူစိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်လာရင် သူ့ရဲ့နာမည်ဆိုးလက်စွဲစကားနဲ့စပြောတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ “ဟေ့ကောင် 1-1 ဖိုက်မလား” ပါပဲ!
ဒီကစားသူကတော့ သင့်ရဲ့ kills နဲ့ buffs ခိုးဖို့ကျင့်ထားသူပေါ့။ KS (kill steal) ဘုရင်အနေနဲ့ သင်သတ်ဖို့မဲပြီးအကြာကြီးလိုက်နေတဲ့ရန်သူကိုလည်း KDA တွေကျအောင် ခိုးဖို့ဉာဏ်နဲ့ပါရမီကပါလာတာပေါ့။ Savage ရဖို့ 1 kill ပဲလိုတော့တာလား? အမလေး ဆောရီးပါနော် ခိုးနေကြအကျင့်တွေဖျောက်မရလို့။ Jungle နေရင်လည်း သင်ကဇွဲရှိရှိနဲ့ခုတ် “RETREAT” လို့ တဆာဆာအော်နေလည်း နောက်ဆုံးထိတဝဲလည်လည်လုပ်နေပြီး jungle buff ကိုတစ်ချက်တည်းခုတ်ပြီး ခိုးစားတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ။
Mobile Legends မှာအနိုင်ရဖို့ဆိုရင် အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အသင်းသားတွေနဲ့စကားပြောဖို့ chat ဖို့က မဟာဗျူဟာတွေချဖို့ သိရဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သောကစားသမားတွေကတော့ chat function ကိုမဟုတ်တာတွေနဲ့ လုံးဝအရေးမကြီးတာတွေပြောဖို့သုံးကြတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုပဲ တစ်ချိန်လုံးပြောနေပြီးတော့ တကယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာပြန်မပြောတာ တစ်ခါတစ်လေ အသတ်ပါခံရတတ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ မဟုတ်တာပြောဖို့ စာရိုက်နေရလို့ပါ။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့ စကားပြောနေရင် ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့ ကိုယ့်အသင်းအတွက် ဗျူဟာတွေကို ဟိုဖက်ပါမြင်နိုင်အောင် ALL ကိုပို့နေတာပါပဲ။ အဲဒီမှာသွားရော။
သတိမမူ ဂူမမြင်ဘဲ farm တဲ့သူ
ဒီကစားသမားအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာတစ်ခုရှိပါတယ် အဲဒါက farm တာပါ။ ပိုဆိုးတာက သူတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတာကလည်း farming ပဲ early game ကနေ late game ထိ! သူက farm ဖို့ပဲအာရုံရှိတော့ အရေးကြီးတဲ့ battles တွေဆိုလွတ်ကုန်တယ်။ နောက်သတိရတဲ့အချိန်ကျတော့ အသင်းသားတွေကအကုန်သေနေပြီ။ ဒီကစားသမားမှာ map ကိုသတိထားနိုင်စွမ်းနည်းတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ base ထဲ Lord ဖြစ်ဖြစ် enemy ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲရောက်ရောက် သူ buff စားရရင်ပြီးရော။ လောဘကြီးပုံများ။
အဲ့တော့ ဒီလို သိပ်မဟန်တဲ့သူတွေနဲ့ ခဏခဏကျနေရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မကြာခဏဆော့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ အဲလိုဆို လုံးဝမသိတဲ့သူတွေနဲ့ဆော့ရတာထက်စာရင် ပြင်လို့ဆင်လို့ပိုလွယ်ပါတယ်။ ကစားတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ရုတ်တရက်ကျတဲ့အခါကျရင် သူတို့ကို add ထားပြီး လက်ခံလာရင် နောက်ပွဲတွေလည်းတူတူဆော့လို့ရတာပေါ့။
Previous articleWild Rift Patch 2. ရောက်ရှိလာပါပြီ ! Champion အသစ်တွေ, Spectator Mode, နဲ့ အခြားအရာများစွာ
Next articleMLBB Hero လမ်းညွှန် : သင့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုအလဲထိုးမယ့် Pacquito အတွက် အကောင်းဆုံး build